UFO Kuona: Nzvimbo Dzakanakisa Kuti Ubate Chisingazivikanwe Kubhururuka Chinhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » UFO Kuona: Nzvimbo Dzakanakisa Kuti Ubate Chisingazivikanwe Kubhururuka Chinhu
Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Zvichida kuva nenguva yakawanda kumba nekuda kwe COVID-19 zvakatipa nguva yakakura yekutarisa kumusoro kwedenga uye nekuona… UFOs. Kana kuti ndezvekuti pane zvechokwadi kune akawanda UFO kuona kupfuura pakutanga?
Sekureva kwemauto.com, pakanga paine anopfuura chiuru chimwe cheUFO kuona muna 1,000 (dzakatenderedza 2020 acho) kupfuura muna 7,200.
Vane mafoni ane akavakirwa-mukati makamera akaita kuti zvive nyore kutora chimwe chinhu chisingazivikanwe kumusoro mudenga? Mifananidzo yacho haifanire kunge iri yakanaka kutonga kubva kune ese apfuura mifananidzo inotorwa.
Ungave nemaune kuenda kunzvimbo inozivikanwa neUFO kuona kana iwe waizoita zvinopesana ugare kure?
Kune akatiwandei ayo anofadzwa neZvisingazivikanwe Kubhururuka Zvinhu, uye rwendo kuenda kunzvimbo inozivikanwa nekuona izororo rakagadzirwa kuti rirongedze. Kana iwe uri mumwe weavo vari kutarisira kusangana kwepedyo kwerudzi rwechitatu, heano dzimwe nzvimbo dzekuisa pauri UFO muvhimi runyorwa.
Nzvimbo 51, Nevada
Kubva pamazano matsva ekurangana kuenda kuFacebook zviitiko zvinokurudzira vanhu kumhanyira muchivande, Chikamu 51 chinogara chiri munhau. Kuiswa kwemauto eUS, iri chinhambwe chingangoita makiromita zana nemakumi matanhatu kuchamhembe kweLas Vegas, inzvimbo inowirirana yevanyengeri. Pfungwa uye kunyangwe mabhuku evanoongorora nevari mukati mehurumende vanotaura kuti nzvimbo iyi inzvimbo yekuchengetera chitundumuseremusere chakabvaruka kusanganisira vanogaramo, vapenyu nevakafa, pamwe nezvinhu zvakawanikwa kuRoswell. Vamwe vanototenda kuti nzvimbo iyi inoshandiswa kugadzira ndege zvichibva pahunyanzvi hwekunze hwakawanikwa. Vamwe veUFOlogists vanoti inzvimbo nyowani yepachivande ichangobva kuwanikwa munzvimbo yepasi peMakomo ePapoose muNevada ndipo panochengeterwa zvisikwa zvepasi nepasi uye hazvisisiri paNzvimbo 160. Kunyangwe iine vatorwa kana kwete hazvikwanisike, asi nzvimbo yacho ndeyechokwadi Classified. Vashanyi vanogona kutyaira kumusoro mugwagwa mukuru wenyika pano une chikwangwani "Extraterrestrial Highway." Yakazara nemabhizinesi evatorwa-munzira munzira yerenje. Rangarira kutarisa kumusoro kana iwe uri pano panguva yehusiku. Rinogona kunge riri zuva rako rerombo, kana um husiku.
Ngarava yamai yenzvimbo dzese dzeUFO, nzvimbo ino inozivikanwa neRoswell Incident yakaitika muna Chikunguru 1947. Sezviri pachena, mauto eUS akazivisa kuti yainge yawanazve spacehip kubva kurenje riri pedyo (gare gare, vakati raingova bharumu remamiriro ekunze. ). Kubva ipapo, vanyengeri voruzivo vakatora zvasara zvesaucer inobhururuka, uye kunyangwe vakafa vatorwa, vakaendeswa muchivande pano. Nzvimbo iyi inogara Roswell Spacewalk uye neInternational UFO Museum uye Research Center pamwe neRoswell Museum & Arts Center, ese akazara nevanhu vanofarira nzvimbo. Kutarisa UFO chaiyo pano kungave kwakaomarara, asi tungamira kuguta reiyo Roswell UFO Mutambo unoitwa wega wega wechina waChikunguru kupera kwevhiki kupemberera zvinhu zvese zvekunze kwenyika pamwe nevamwe vateveri. Zviuru zvakapfeka zvipfeko zvinosangana pano zveiyi Comic-Con yevanonamata UFO, iyo inosanganisira hurukuro uye yevaenzi-themed parade.
Joshua Tree iri pa29 Palms Highway inozivikanwa kuti ine nzira zhinji dzepasi pevhu dzakakwira mumaminerari zvirimo pasina chikonzero chinotsanangurwa. Iyo National Park yaimbove imba kumigodhi mazana matatu murenje rayo rakakura, kusanganisira yakasarudzika chena kristaro quartz chikomo kuseri kweGiant Rock. Iyo inofungidzirwa kuti inzvimbo yevatorwa nevamwe vaongorori. Vateveri veUFO vanoongorora gwenga pano vanotenda kuti Joshua Tree anogara pamakumi matatu nematatu kuchamhembe zvakafanana naRoswell. Nekudaro, inogona kuve a hotspot yeUFO kuona. Kwemakore mazhinji, vaongorori veUFO vakatendeukira pano kwevhiki refu kwehurukuro newekishopu pane izvo zvisina kutsanangurwa. Inofungidzirwa kuti Woodstock yeUFOlogy, kupera kwevhiki kunovhenekera pane zvese zvisingatsanangurike kubva pasainzi yeUFOs nevatorwa vekare kumatangiro evanhu uye kuburitswa kwehurumende.
Iyo mazana mashanu-mazana emamita Aperture Spherical Teresikopu (FAST) ndiyo teresikopu yeredhiyo yakakura uye inonzwisisika pasi rose. Inowanikwa mune imwe nzvimbo yekumaruwa yeChina Guizhou province, iyo FAST Radio Telescope, iyo yakaona chiedza chekutanga muna 2016, inofungidzirwa nevatsvakurudzi vechiChinese kuti ndiyo nzira yakanakisisa yevanhu yekuita zvinyorwa kubva kunze. Nickname Tianyan, zvinoreva kuti "Ziso reDenga" kana "Ziso reDenga," nevakavamba, yakawanikwa ichigadzirisa zvimwe zvakavanzika zvikuru muchadenga. Imwe yemamishini ayo ekutanga kuona ekutaurirana kubva kune vatorwa. Shanyira ichi chishamiso chikuru chesainzi uye uwane mukana wekutarisa masayendisiti achishanda pane mamwe mapurojekiti ane chekuita nezvekunze.
Wycliffe Zvakanaka, Australia
Wycliffe Well iri padhuze neStuart Highway muNorth Territory yenyika inozivikanwa seguta guru reUFO reAustralia. UFO kuona kunoitwa nevanhu vemuno kuno kwakajairika zvekuti nzvimbo yacho ino ganhurana yakazara yevaenzi muWycliffe Well Holiday Park. Ndiyo imwe yenzvimbo dzepamusoro shanu dzekuona vatorwa munyika umo vafambi vanogona kubhururuka kuti vaone UFOs inoswededzwa ne, kazhinji panguva yekutanga kwemwaka wakaoma kubva Chivabvu kusvika Gumiguru. Mishumo yezvinhu zvisinga zivikanwe zvinobhururuka zvakatanga kubuda munzvimbo ino kubvira mazuva eHondo Yenyika II. Vashanyi vanouya pano vanogona kutora materesikopu avo uye kugara mumakamuri paWycliffe Well Holiday Park. Vagari vemo vanoti kuona kwezvinhu zvisina kujairika rinenge rimwe zuva roga roga panguva ye "mwaka weUFO."
Guta reSan Clemente rinoonekwa seye risingazivikanwe UFO guta guru renyika. Sekureva kwevaongorori vanoshanda pano, UFO kuona pakati nepakati vhiki imwe chete. Kune zvakawanda zvakaonekwa zvekuti Chilean Tourism Board yakagadza yepamutemo 30 km-refu UFO nzira muna 2008. Iyo nzira inotora vafambi kuburikidza nemakomo eAndes anofukidza nzvimbo dzakasiyana siyana uko kusangana kwepedyo kwakataurwa. Nzvimbo yacho inogara kuColbún Lake iyo ine zvicherwa zvemukati zvirinani pasina chero sosi (kurira kunozivikanwa?). Iyo nzira yekumira yekumira ndiyo El Enladrillado, yakakura uye inoshamisa nzvimbo yakatetepa yakaumbwa nemazana maviri akanyatsocheka matombo anoputika ayo anofungidzirwa kuti akaiswa nevanhu vekare. Vanyengeri theorists uye ivo vaongorori, zvisinei, vanotenda kuti ipadhi rekumhara kune vekunze.
JOHN DEEGAN anoti:
Gunyana 21, 2021 pa 10: 38
Ndakapupurira nemumwe wandaishanda naye UFO ichitenderera pamusoro pechigadzirwa chemakemikari muManchester nenguva dza5.50am mamwe mangwanani aChikunguru muna 1999, ndaienda kunoshanda muTrafford Park pabhasikoro rangu pandakanzwa ruzha rwezvirimwa zvemakemikari zviri pedyo zvichienda. , pandakatarisa kumugwagwa waive nechikepe ichi chaitenderera pamusoro pemapaipi emakemikari, ndakakurumidza kubatanidzwa nemumwe wandaishanda naye uyo aichovha bhasikoro achienda kubasa. Pakamboita karunyararo panguva iyi ruzha rwaingova rwehuta chete, hapana ruzha rwaibva mungarava yacho, vaiita sevainge vakapaka nepakati pemhepo vakaisa hand brake. Yakanga isiri yenyika ino, yakaita kuti tose tinonoke kushift yedu ya6am mufekitori yandaipisa panguva iyoyo, saka ndakava mutendi kuti taishanyirwa nevekunze, ndakanga ndaenda kuhurukuro muna 1994 pamusoro pe Suffolk UFO yakapihwa naCol. Charles Holt aimbova mutevedzeri wemukuru wenzvimbo yemauto yeUsa ipapo uye akatarisa zvirongwa zvishoma nezvenyaya iyi kare. Zvakangove semutendi wechikatorike ndipo muna Kukadzi 2016 ndakasangana nenyaya yekuti Jesu naMaria nevamwe vevatsvene vaive vazviratidza kumuoni Veronica kuBayside USA (1970-94) pakati pezvimwe zvinhu zvavakamuudza nezve zvaizoitika. munguva yekupedzisira yatiri kurarama mairi yaive yekuti ndiSatan nevamwe vake vaibhururuka nendege dzakasiyana siyana idzi pasi rose kuti vanyengedze vanhu kuti vatende kuti taishanyirwa nemarudzi asiriko. Kana kubvutwa kwechiKristu kuchiitika kwandinotenda kuti inguva yemakore gumi aya nhau nhau dzichataura kune avo vakasara kuti kubiwa kwevatorwa kwakaitika kuitira kuvhara chiitiko chaMwari (dzimwe nhau dzenhema), izvi zvichazivisa mugore re7. Nguva yeKutambudzika kureva, apo Jesu anosunungura vatasvi vemabhiza 4, hondo ichatangwa nemauto akabatanidzwa eRussia/China & New York inorohwa necomet, pane zvakawanda pane izvi enda kune shrine webhusaiti. http://www.tldm.org uye tarisa pakanzi MaDirectives enyaya yacho. Kuonekwa kwavo paBayside kwakasimbiswa nezvishamiso zvakawanda zvakaitwa ipapo, kunyange zvazvo kereke isingambozvizivi zviri pamutemo, vakataura ipapo kuti Satani akanga apinda muchechi iye zvino padanho rayo repamusoro-soro sechikamu chehondo yezvemweya inoenderera mberi, papa chaiye wekupedzisira akanga Benedict.
Pakauya iyo UFO & Consciousness show kuManchester muna 2017 yakaitika mhiri kwemugwagwa kubva kwandakanga ndaona UFO muna 1999, ndakapihwa rwendo rwangu rwekutenda handitendi kuti izvi zvakangoitika. Vanosimudzira pfungwa pashoo yekuti tiri kushanyirwa nemarudzi evatorwa uye mamwe edzidziso dzekurangana dzakatenderedza izvi. Kune uye kwave kune akawanda madocumentary pa tv pamusoro penyaya inosimudzirawo pfungwa iyi.
Ndakanga ndine tsamba yakaburitswa mupepanhau repanyika pamusoro penyaya iyi muna 2018 pamabiko eKutorwa kweMhandara Yakaropafadzwa Mariya.
Saka icho chaive chakavanzika changu chakatsanangurwa, Satani nevevamwe vake vanhu vane masimba emweya ndosaka bhaibheri richitiudza kuti hatirwisane nenyama neropa chete asi masimba nehukuru. Ndosaka mukristu aine munamato/kutsanya nezvimwewo mudura rezvombo zvemweya, izvo zvinoshanda zvinopesana nemabasa ake.